Izidakamizwa zidayiselwa izingane - Petros | isiZulu
Izidakamizwa zidayiselwa izingane - Petros
Sisazomzamela uCwele - Ummeli
Umfana, 14, ubhadanywe nezidakamizwa
Kuboshwe ababanjwe nezidakamizwa e-EC
Johannesburg - Izingane ezincane eziseminyakeni esuka kwengu-12 ubudala zidayiselwa izidakamizwa emagcekeni esikole, kusho uKhomishana wamaphoyisa eGauteng uLieutenant General Mzwandile Petros ngoLwesithathu.
"Sengike ngahlangana nothishlanhloko bezikole zamabanga aphansi ngaso lesi sihlava sezidakamziwa. Yinkulu kakhulu inkinga... abanye bakhala ngokuthi abasazi ukuthi benzenjani," kusho uPetros etshela izintatheli eGoli.
"Uma izidakamizwa zithathelwa ezikoleni, kusobala ukuthi baseduze abazidayisayo."
UPetros ubenikeza isithombe sezibalo zodlame eGauteng onyakeni ka-2011/2012.
Ezinye izingane zesikole zisebenzisana namaphoyisa ukunqanda lo mkhuba, esho.